Akanandaba nabamgxekayo owine kuma-Crown - Ilanga News
Home Izindaba Akanandaba nabamgxekayo owine kuma-Crown
Akanandaba nabamgxekayo owine kuma-Crown
AKAKUGQIZI qakala okushiwo nguKelly Khumalo oyisilomo se-Afro-pop ngokuphumelela kwe-ngoma yakhe umculi we-gospel, uCanaan Nyathi (osesithombeni), oklonyeliswe ngendondo yeBest Gospel Song koweSABC Crown Gospel Awards, emcimbini obukhonjiswa kumabonakude ngeSonto kusihlwa.
Ekhuluma neLANGA uCanaan, uthe uyamhlonipha uKelly nombono wakhe, kodwa akuthi shu ukuthi kunabakhonondayo ngokunqoba kwakhe.
Uthe okumnqobisile kulo munxa obuvotelwa ngabantu, kube wukukhankasa kwakhe okuhlanganisa nokuhambela amabandla ahlukene.
NgoMsombuluko uKelly ubabele enkundleni yokuxhumana waqopha i-video ezwakalisa ukudumala ngokukhala ngaphansi kwengoma yakhe ethi‚ “Esiphambanweni” ayicula noHlengiwe Mhlaba.
Ucele abalandeli bakhe ukuba baqhathanise ingoma kaCanaan ethi‚ “Baba Ziveze” okuyiyona adle ngayo umhlanganiso neyakhe ethi‚ “Esiphambanweni”.
Uthe ingoma yakhe ihambe phambili ngokubukwa ezinkundleni zomculo okubalwa iYoutube, nasemisakazweni idlalwa kakhulu.
Le nkulumo kaKelly ilandelwe yisitatimende esikhishwe ngabeGospel Powerhouse eyengamele lo mcimbi wezindondo, becacisa ngendlela okuvotwe ngayo nanezibalo uKelly azitholile njengoba kube nguyena othole amavoti amancane kunabo bonke abebeqokwe kulo munxa.
Abanye abebeqokwe kulo munxa ngezingoma zabo, nguDumi Mkokstad noVusi ngengoma ethi‚ “Yibanathi” uBucy Radebe, ngethi‚ “Uzuy’gcine Impilo Yam, Xoliswa Kwinana ngethi, “Uyasondla” neTshwane Gospel Choir ngethi, “Imvuselelo”.
UCanaan uthe ingoma yakhe iphume ngasekuqaleni konyaka kanti uhambele izindawo ezahlukene ukuyisabalalisa kubantu, okwenze kwaba lula ukuba bayi-votele.
Uthe uyabahlonipha bonke abaculi abebeqokwe naye kulo munxa, kanti uzizwa ejabulile ukuthi yingoma yakhe egcine ihamba phambili.
“Ngeke ngingene kokushiwo ngabanye ngayo, kodwa abantu bakhulumile ngamavoti abo futhi ngiyabonga kakhulu ngokuthi bayivotele ingoma yami,” kusho uCanaan.
Uthi ngesikhathi izwe livaliwe abantu bebeziduduza ngayo ingoma yakhe, benxenxa uMdali ukuba aziveze ezikhathini ezinzima abebebhekene nazo zokubhebhetheka kweCoronavirus.
Uthe okubalulekile manje kuyena wukuqhubeka nokuhambela izindawo ezahlukene ebonga abalandeli bakhe.
“Ngikhuluma nje besisanda kukhuluma noDumi Mkokstad othole indondo ye-Artist of the Year, ukuze senze umcimbi wokubonga lapha eThekwini noma eMgungundlovu, sibonge abantu ngokusivotela kwabo,” kusho yena.
Uthe uhlela ukuthi aqophe enye i-albhamu ngoMandulo (September) wonyaka ozayo okuyinyanga azalwa ngayo.
Previous articleKuhlehle umngcwabo kugula unina kaNgcongca
Next articleKubatshazwa isihluku iphoyisa lesifazane “lidubula libulala owesilisa”